Yakazara Hondo: Warhamer yaizove padyo nekusunungurwa yeMac | Ndinobva mac
Yakazara Hondo: Warhamer inogona kunge iri padhuze kuburitswa yeMac
Mavhiki mashoma apfuura iyo Mac mutambo Warhammer 40.000: Kwayedza yeHondo II yakasvika zviri pamutemo, yevashandisi veMac neLinux neruoko rwemugadziri Feral. Iyi saga hapana mubvunzo kuti ndeimwe yesaga rine simba maererano nemitambo yeMac neLinux, saka hazvishamise kuti vashandisi vazhinji vanoda kuona kuvhurwa uku munguva pfupi. Zvinoenderana neshoko reFeral Yakazara Hondo: WARHAMMER mutambo uchave uripo kudonha uku Uye izvi zvinoreva kuti ivo vachazvizivisa pawebhu munguva pfupi.
Iyi ndiyo chirevo chinowanikwa pane iyo Feral Inopindirana webhusaiti pane kuburitswa kweHondo Yese: WARHAMMER iyo inofanirwa kuve iri padhuze zvakanyanya:
Gare gare, sezvo zhizha rinopera uye kudonha richiswedera, mutambo wehunyanzvi wehuwandu hwakaenzana unosimudza mureza wayo pamapuratifomu eMac neLinux. Yese Hondo: WARHAMMER uyai nhevedzano War Total kunzvimbo yekufungidzira kwepamusoro.
Unleash dzinotyisa zvikara uye ngano magamba kuhondo pamwe nezviuru zvevarume nezvikara zvakatarisana neicho chaicho-nguva zvine hunyanzvi hondo. Master dutu remashiripiti masimba uye vanokunda matenga nezvisikwa zvinobhururuka, kubva kune anotyisa shato kune anotyisa griffons.
Nyika Yakare inotangazve neruzha rwehondo isingaperi.
Mumutambo uyu tinogona kutamba mune imwechete mutambi mushandirapamwe mode kana muInternet multiplayer mode. Pane ino chiitiko Hondo Yese: Warhamer inotibvumidzawo kutamba neshamwari mumushandirapamwe modhiyo iyo yaunogona kusarudza divi rimwe chete kana kurwira yakanangana naye neboka rake. Saka isu tichava takatarisira kusvika kwake kwepamutemo kwatisingafunge kunotora nguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Yakazara Hondo: Warhamer inogona kunge iri padhuze kuburitswa yeMac
MacBook kana iPad, mudziyo upi wandinounza kukirasi?